Kazhinji nzira dzaishandiswa kudhinda muChina-Blog-Bhuku Kudhinda China
Isu takavhura uye tinopora kugadzirwa senguva dzose . Tichapurinda uye kuendesa zvigadzirwa zvako nenguva. Welcome to email isu,isu tichakupindura iwe mu2hours, waita hako.
Dhinda Bhuku Kudhinda
Saddle Yakasonerwa Bhuku
Spiral & Wire-O Bound Bhuku
Notebook & Zvinyorwa Bhuku
Chikwangwani & Makadhi Kudhinda
Flyer & Kudhinda mapepa
Unhu Hwekutarisa Sisitimu
Mapepa akakurumbira uye huremu hwepepa
Tora Tsika Quote Zvino!!
Kofi Tafura Bhuku Kudhinda
Kupenda Mabhuku Kudhinda
Kubika Bhuku Kudhinda
Iwe uripano : Home>Blog
Kazhinji nzira dzaishandiswa kudhinda muChina
nguva: 2020-11-20 Hits: 16
Kune vazhinji kudhinda mafekitori muChina, iyo yekudhinda nzira yekudhinda zvinyorwa uye mifananidzo pabepa kana firimu inogona kuganhurwa muletpresspress, lithographic, intaglio, uye mahwendefa akapetwa zvinoenderana nechimiro cheplate, uye anoshandiswa maererano nechinangwa. Aya akajairika akajairika ekudhinda matekinoroji anga achichinja kubva mukuenzanisa kuenda kudigital, uyezve yakabatana kunetiweki kuti ichinje maitiro avo.
Rega ndimbotarisa pane simba reiyo yepamusoro-chaiyo kudhinda tekinoroji uye mashandisiro ayo muinjiniya yemagetsi kuongorora mamiriro azvino ekudhindisa offset (lithographic) uye skrini yekudhinda (serigraphy). Kazhinji, zvinogona kutariswa kuti iyo inki viscosity yakati rebei uye kubereka kwefirimu ukobvu hwakaonda, uye yakanaka mutsetse kubereka inoita kunge iri nani.
Semuenzaniso unonyanya kufarirwa weoffset kudhindisa mu China yekudhinda mafekitori, pakave nezviitiko apo chivharo chemuvara chemagazini yevhiki nevhiki chakadhindwa nacho 700 mitsara mhiri kwemakungwa. kazhinji 175 mitsara inoshandiswa kudhinda, asi ndakangoerekana ndafunga kushandisa 700 mitsara yekudhinda. Ehe saizvozvo, iko kuratidzwa kwezvikamu zvakanaka kuchavandudzwa. Mifananidzo isingaonekwe neziso rakashama inogona kuzivikanwa zvakajeka nekutarisa kuburikidza negirazi rinokudza. Nekuti iro dot, kunyangwe iyo yakatetepa mutsetse upamhi zvakaoma kuratidza, inogona kuratidza kusvika ku20μ. zvisinei, izvi zvinongoratidzira mufananidzo wakadhindwa. Kana zvasvika pakuenzanisira kubereka kweinjiniya kunyorera, izvo zvinodikanwa zvakanyanya kuomarara. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nekusakwana kweinki firimu ukobvu.
Pamusoro pe, semuenzaniso we intaglio kudhinda, chinyorwa chakanaka uye yakanaka shading inodhindwa kune iyo anti-yekunyepedzera yemasheya, kuchengetedzeka, nezvimwewo. Kana iwe ukatarisa chikamu ichi chemufananidzo negirazi rinokudza, iwe unogona kunge uchiona kubereka kwemitsetse yakanaka ye10-20μ. Kazhinji kutaura, zvichienzaniswa neoffset kudhinda, Giravhiti yekudhinda inogona kusimudzira kukora kweiyo ink firimu, saka zvinobatsira mukushandisa kweinjiniya yemagetsi.
Uchishandisa gravure offset kudhinda kuprinta LCD color girazi
Heino muenzaniso wekushandisa gravure offset kudhinda kuprinta LCD mavara magirazi. Nzira yekudhinda iyo inki inoshandiswa kune iyo intaglio ndiro uye inoendeswa kugumbeze resilicon, uye ipapo huwandu hwese hunoendeswa kune ndiro yegirazi. Panguva yekugadzirwa kwemazhinji, maererano nesaizi yekugadzira, girazi remavara rine hupamhi hwemutsara 40 ~ 50 μ yakadhindwa ikaiswa pamusika. zvisinei, nyaya yasara ndeye kutsiga kwemuenzaniso wepasi.
Senzira yekuvandudza kugadzikana, imwe nzira yekudhindisa yakagadziridzwa. Uku ndiko kutanga kupfeka inki zvakananga pajira, bvisa izvo zvisina kukodzera zvikamu neyakaipa yekubatsira ndiro, uye pakupedzisira wochinjisa kubani regirazi ndiro zvakare. Kutsiga kwemuenzaniso kunoenderana zvachose neyakaenzana uye kutsetseka kweiyo inki yakaputirwa pagumbeze. saka, zvinogona kutaurwa kuti zvichienzaniswa neiyo gravure offset yekudhinda nzira, iyi nzira inotarisa pane nyore kwekudzikama kwekutonga.
Prev Page : Ruzivo rwekutanga rwekudhinda mabhuku
Next Page : Ndezvipi zvinhu zvemutengo wekatalogi yekudhinda china?
Titevere isu pa Instagram
Copyright © 2020 BookPrintingChina.com Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.